OGEYSIIS MUHIIM: Xawaaladda PayQuik oo idin keentay adeeg casri ah oo si fudud biilasha aad uga dirsan karto Mobile-kaada | HalQaran.com
Home Warar Cusub OGEYSIIS MUHIIM: Xawaaladda PayQuik oo idin keentay adeeg casri ah oo si...
OGEYSIIS MUHIIM: Xawaaladda PayQuik oo idin keentay adeeg casri ah oo si fudud biilasha aad uga dirsan karto Mobile-kaada
Haddaad in muddo ah safaro ugeli jirtay inaad biilal dirsato ama ka welweli jirtay inay kaa daahdo biilashii aad dirtay ama aad qaali ku dirsan jirtay, hadda Xawaaladda PayQuik ayaa timid, waxayna keentay adeeg heer sare, deg-deg, qiimo jaban iyo xarun laguugu xallinayo 24-ka saac wax kasta oo kaa qaldama.
Bulshada Soomaaliyeed ee Ku nool Qaaradda Yurub, gaar ahaan dalka Jarmalka, waxaa loogu bishaaraynayaa in Xawaaladda Casriga ah ee Online-ka, PayQuik Digital Money Transfer usuuro galinayso in qofkasta iska diiwaangelin karo nooc kasta Dokumenti uu haysto.
PayQuik waxay si toos ah lacagaha la diro ku shubtaa Mobile-lada dalalka kala ah, Soomaaliya, Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda iyo Brundi. Xawalaadda PayQuik qiimo-jaban kaga dirso Mobil-kaaga adigoo gurigaada jooga.
Fiiro Gaar ah: EVC = Southcentral waa magaca System ka kujira.
PayQuik waxay Partner la-tahay ama isla shaqeeyaan TAWAKAL EXPRESS, bixisana wixii Cash ah meelkasta oo aan Soomaaliya ahayn iyo MPESA, MTN, AIRTEL, TIGO iyo kuwo kale oo badan.
Halkaan ka daawo waxay ay bulshada u qabato PayQuik
Intee ka shaqeysaa PayQuik
PayQuik waxay sharci ku leedahay 27 dal oo Yurub, Australia iyo waddamo badan oo Afrika ah. Sidoo kale dalalka Mareykanka iyo Canada waddada ayay ku soo jiraan oo howshooda waa ay socotaa.
Goormee la aas-aasay PayQuik
PayQuik waxaa la aas-aasay sanadkii 2018-dii, waxayna si toos ah u shaqa billowday 07. March 2020-ka, iyadoo ay ka howl-bilowday dalalka Yurub, Australia iyo dalal kale oo badan.
PayQuik xarunteeda weyn waxay ku taalaa magaalada Perth ee galbeedka dalka Australia, xarunteeda dhexe ee Yurub waxay ku taalaa magaalada London ee dalka Ingiriiska. PayQuik waxayna tiigsanaysaa suuqyada caalam ka.
Halkaan ka daawo faa’idada Xawaaladda PayQuik iyo adeegeeda casriga ah
Haddaba Macmiil iska diiwaan-geli maanta si aad uga mid noqotid maamiisheena sharafta badan.
Habka la isku diiwaan-geliyo iyo dirsashada biilasha:
Marka hore waxaad u baahan tahay Mobile Internet leh ama Computer midka aad heli karto, kaddibna si sahlan isku diiwaan-geli adigoo raacaya tilmaamaha hoose.
Halkaan ka daawo habka ama qaabka aad isaga diiwaan-gelin karto Xawaaladda PayQuik
Halkaan ka daawo sida fudud ee lacagaha biilasha uga diran karto Xawaaladda PayQuik
Macmiil halkan laguma soo wada koobi karo adeegga fudud ee xawaaladda PayQuik ee si deg-deg ah u booqo website-kooda www.pay-quik.com
Ama ka wac Teleefoonadaan.
Mahdi (0176 620 03112)
Adan (0176 659 72220)
Xawaaladda PayQuik Digital Money Transfer